जान्नुहोस् कुन रक्तसमुह भएका व्यक्तिमा कस्तो किसीमको क्षमता हुन्छ त ? – Khabaarpati
December 14, 2020 December 15, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on जान्नुहोस् कुन रक्तसमुह भएका व्यक्तिमा कस्तो किसीमको क्षमता हुन्छ त ?
ओ नेगेटिभ रक्त समूहका व्यक्तिको सोच एकदम संकीर्ण हुन्छ । यस्ता व्यक्तिहरू केवल आफ्नो बारेमा मात्र सोच्छन् । यिनीहरू संकीर्ण मानसिकता वाला हुन्छन् । यिनीहरू नयाँ विचारलाई सजिलै स्वीकार्न सक्तैनन् । ओ नेगेटिभ भएका व्यक्तिले केवल ओ नेगेटिभ रक्त समूहको रगत लिन सक्छन् । ,